Khabar Break - हामी मधेसमा पनि पहिलो पार्टी बन्छौं
० प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको कस्तो तयारी भइरहेको छ ?
–पहिले नै चुनावको मिति तय भएको सन्दर्भमा टिकट वितरण प्रक्रिया थोरै बाँकी थियो । अहिले पनि बाँकी उमेद्वार निश्चित भइसकेको छैन । अब चाँडै नै जहाँ जहाँ निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यहाँ उमेद्वारी निर्णय गर्नका लागि छलफल सुरु हुँदैछ ।
० प्रदेश नं २ मा एमालेको खासै उपस्थिति छैन, एमाले मधेस विरोधी पार्टी हो भन्ने हल्ला व्याप्त छ, खासमा त्यहाँ एमालेको अवस्था कस्तो हो ?
–हाम्रो त्यस्तो बुझाइ छैन । सुरुवातदेखि नै हामी त दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो चरणमै चुनाव होस् भन्ने पक्षमा थियौं । दोस्रो चरणमा पनि किन स्थगित भयो ? विषयावस्तु शंकाको घेरामै छ । हामीले स्थगित गरिनु हुँदैन भनेका थियौं । यदि एमाले मधेसविरोधी हो भने ठिकै छ नि चुनाव होस् । कसको के हैसियत हो जनताले देखाइदिन्छन्, एमाले मधेसविरोधी हो कि के हो ? हामीले एमाले मधेसविरोधी होइन भनेर पटक पटक प्रष्ट पारिसकेपछि अरुले अनावश्यक हल्ला चलाएर हुन्छ ? मधेस एमालेले भूमिगत कालदेखि लिएर ठूलाठूला जनपक्षीय आन्दोलनहरु गरेको ठाउँ हो । एमालेका शीर्षस्थ नेताहरुले मधेसमै भूमिगत बसेर राजनीति गर्नुभएको हो । मधेसमा एमालेका नेताहरुले नै विशेष खालका आन्दोलनहरु उठाउनुभएको छ । एमालेले भूमिगत बेलामा जाली तमसुक च्यात्ने आन्दोलन, त्यसपछि ‘रे नहि जि कहो’ आन्दोलनलगायत जनपक्षीय आन्दोलनहरु गरेको ठाउँ हो । यसैगरी ‘बनि’ आन्दोलन पनि हाम्रो पार्टीले मधेसमा चलाएकै हो । त्यसैले अहिले जुन आरोप लगाएको छ, ती सबै निराधार आरोप हुन् ।
२०६४ को कुरा लिनुस् या ०७० कै चुनावको कुरा गर्नुस्, संविधानसभामा एमालेको उपस्थिति राम्रो रह्यो । त्यसकारण अहिले कसैले एमाले मधेसविरोधी भयो भनेर आरोप लगाउँदैमा एमाले मधेसविरोधी हुनै सक्दैन । एमालेले मात्र जनपक्षीय कामहरु गरेको छ । अहिले पनि चाहे त्यो माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको बेलामा होस् वा झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारको पालामा होस् वा पछिल्लो समय केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा होस्, मधेसका हुलाकी सडक, बाँकी बाटाघाटा वा नगरमा विकास विनियोजन गर्ने सवालमा होस्, पर्याप्त बजेट हालिएको छ । त्यसकारण कुनै पार्टी विशेष वा व्यक्ति विशेषले भन्दैमा एमाले मधेसविरोधी हुँदैन । चुनाव हुन दिउन्, चुनावमा एमालेको राम्रो सहभागिता र उपलब्धि हासिल गर्नेछ । हामी मधेसमा पनि ठूलो पार्टी बन्छौं ।
० मधेसमा घोषित चुनाव हुन करिब डेढ महिना बाँकी छ । पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ, तसर्थ एकाथरीले संविधान संशोधन भएन भने चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन् नि ?
–हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौं, अहिले चुनावको बेलामा संविधान संशोधनको एकोहोरो रटान लगाएर हुँदैन । पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन होस् । चुनाव हुन् दिनुस् । चुनाव भइसकेपछि संविधान संशोधन आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा हो । तर, जतिखेर पनि त्यही कुरा निकालेर कसरी हुन्छ ? संविधान कार्यान्वयनको पाटोतिर पहिले हामी जानुपर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुन दियौं । त्यसपछि विस्तारै आवश्यकता अनुसार संशोधन गरौंला भनेर हामी भन्दैछौं । अहिले जनताले यो कुरा बुझिसकेका छन् । संविधान संशोधनमा पहिलो चोटी जे ल्यायो, सरकारले किन फिर्ता लियो ?आफैं किन फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति बन्यो ?हामी कुनै हालतमा लिँदैनौं, एक अक्षर पनि यसमा सच्याउँदैनौं भन्ने सरकारले पछाडि किन अर्को फेरि दर्ता गराउन खोज्यो?
अहिले पनि जे दर्ता गराइएको छ, त्यो पनि अहिलेको उचित समाधान होइन । यसकारण समाधान हुने गरी संविधान संशोधन हुनुप¥यो । अहिले मधेसका जनताको आवाज एकातिर छ, अनि दर्ता चाहिँ अकोतिर भएको छ । त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौं, पहिले चुनाव होस्, अर्थात संविधानको कार्यान्वयन होस् । त्यसपछाडि यो विषयमा छलफल गरौंला, हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा छैनौं । आवश्यकता अनुसार पहिले जे काम छ, त्यो काम गरौं भनिराखेका छौं ।
० प्रदेश नं २ बाहेक सबैतिर चुनाव भएर जनप्रतिनिधिहरुले काम नै सुरु गरिसके, तर त्यहाँ अझै अन्योल छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबारे राजनीतिकर्मीहरु चाहिँ के भन्छन् ?
–जुन पार्टीले अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ, चुनावको विरोध गरिरहेको छ, त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरु जति क्दो छिटो चुनाव होस्, हामी चुनावमा भाग लिन्छौं भनिरहेका छन् । त्यसकारण अब कुनै अन्योल छैन । चुनाव हुन्छ । चुनाव हुन दिनुपर्छ । सरकारकै मनशाय गलत भयो भने त अर्कै कुरा हो, होइन भने त्यहाँ चुनावको वातावरण छ । मलाई त लाग्छ, दोस्रो चरणमै चुनावको वातावरण् थियो । सरकारले स्थगित गर्नै हुँदैनथ्यो । तर अहिले त झन् विभिन्न प्रदेशका अन्य मधेस क्षेत्रहरुमा एक नम्बर, ५ नम्बर प्रदेशका मधेसमा पनि झन् सानदार ढंगले चुनाव भयो । कहाँ अवरोध भयो ? त्यसकारण प्रदेश नम्बर दुईमा पनि चुनावको वातावरण छ । जनता छिटोभन्दा छिटो चुनाव होस् भनी व्यग्रतापूर्वक बसेका छन् । राजनीतिक दलहरु पनि चुनावमा सहभागि हुन एकदम आतुर देखिन्छन् । कार्यकर्ताहरु पनि अत्यन्त उत्साहित छन् । अब चुनाव रोकिँदैन । चुनाव असोज २ गते नै हुन्छ ।
० मधेसमा एमालले पहिलो स्थान हासिल गर्छ भन्ने आधार चाहिँ के दिन सकिन्छ ?
–कुन तथ्याङ्क हो त्यस्तो ? पहिलेको डाटा छोड्दिएर तपाई ०५१ सालको डाटा लिनुस्, ०६५ सालको डाटा लिनुस् वा संविधान सभा निर्वाचन २०६४ र २०७० को डाटा लिनुस् । मधेस केन्द्रीत दलहरु पनि २०६४ मा अलिकति अगाडि थियो । तर २०७० को चुनावमा त काँग्रेस थोरै सिटले मात्र संख्यात्मक हिसाबले अगाडि छ । भोटको हिसाबले त धेरै जिल्लामा एमाले नै अगाडि छ । मत प्रतिशतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सिरहामा एमाले अगाडि छ । धनुषामा ०६४ मा एमाले काँग्रेसभन्दा ठूलो थियो, अहिले बराबरको अनुपातमा ५ सय हजारको हाराहारीमा मात्र कम छ । महोत्तरीमा एमाले, रौतहट, पर्सा जस्ता जिल्लामा संख्यात्मक हिसाबले काँग्रेस बढी छ। २०७० को आकँडा हेर्दा एमाले राम्रो पोजिशनमा छ । चुनाव होस्, हामी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौं र सोही आधारमा हामी पहिलो पार्टी बन्छौं ।
यस्तो छ समृद्ध भीमफेदी...